‘UNHCR’ gabaasa hin taane dhiyeessuu isaaf dhiifama gaafachuu akka qabu Raayyaan Ittisa Biyyaa beeksise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
‘UNHCR’ gabaasa hin taane dhiyeessuu isaaf dhiifama gaafachuu akka qabu Raayyaan Ittisa Biyyaa beeksise
On Feb 23, 2021 232
Finfinnee, Gurraandhala 16, 2013 (FBC) – Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Komishiniin Olaanaa Baqattootaa (UNHCR) gabaasa hin taane dhiyeessuu isaaf dhiifama gaafachuu akka qabu Raayyaan Ittisa Biyyaa beeksise.
Raayyaan Ittisa biyyaa Sadarkaa Ardii Afriikaa fi sadarkaa addunyaatti hojii boonsaa hojjechaa jiraachuus beeksiseera.
Raayyaa Ittisa biyyaatti Daarikterri Olaanoon Indoktirineeshinii Meejer Jeneraal Mahaammad Tasammaa akka jedhanitti torbee kana keessa humni nagaa kabachiisaa Motoraayizdii 15ffaa Yeroo humna nagaa kabachiisaa turtii isaa Juubaa xumuree jijjiiruuf jedhutti, ergamtoonni garee Juuntaa 15 ta’an Afaan Tigiree dubbatan fi miseensa Humna Nagaa Kabachiisa kan turan gara biyyatti hin deebinu jechuun,Buufata xiyaara Juubaa Keessa ganganachuufii jeequmsa kaasuuf yaalanii turan jedhan.
Gareen ergamtootaa kun maqaa gaarii Raayyaa Ittisa Biyyaafii Maqaa biyyaa xureessuuf dhaabbata biyyoota gamtoomanii bakkee gara garaa keessatti qacaramanii kanneen hojjetan namoota Afaan Tigiree dubbatni UNHCR maqaa uwwisa miidiyaatiin akka isaan argataniif haala mijeessuun dhimmichi hawaasa addunyaa bira akka gahuuf yaalii taasisan jedha.
Gochaa kana kan raawwatan miseensonni Raayya Ittisa Biyyaa Afaan Tigiree dubbatan Mataa isaanii malee kanneen kaan warra Afaan Tigiree dubbatan bakka hin bu’anis jedhan.
Gochaan isaan raawwatanis saalfachiisaa akka ta’e himanii jiru.
Raayyaan Ittisa Biyyaa yeroo Itti haamilee cimaan Harcaatota Juuntaa qulqulleessee seeratti dhiyeessuuf adamsaa jirutti namoota dhuunfaan gochi akkasii raawwatamuun Raayya Ittisa Biyyaa kan bakka hin buuneefii kan namoota dhuunfaa akka ta’e jala muramee beekamuu qaba jedhan.
Kanaaf dhaabileen miidiyaa hawaasa irratti kanfaltiin hojjetaniifii kanneen kaan warri dhimma kana afaarsaa jiran gabaasa madaalawaa akka dhiyeessan hubachiisanii jiru.
Raayya Ittisa Biyyaa akka beeksiseetti, Dhaabbanni UNHCR jedhamus gabaasa dogoggoraa hawaasa burjaajessu tamsaasuu isaaf dhiifama gaafachuu akka qabu beeksisanii jiru.
Mootummaan naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf xiyyeeffannoon…
Yadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa sababeeffachuun Addabaabayii michummaatti…
Bulchiinsi magaalichaa naannoo Tigraayiif birrii miiliyoona 100 fi meeshaalee birrii…
Ityoophiyaatti namoonni dabalataa 1,019 vaayrasii koroonaan qabamuu ibsame
Dhoksaan gara Finfinnee kan gale Isnaayparii, Bireen,…
Biiroon Barnootaa Oromiyaa Qormaata Kutaa 12ffaa irratti…
Galmeen kaadhimamtootaa guyyaa 4f dheerate
Mootummaan naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa…
Yadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa sababeeffachuun…
Bulchiinsi magaalichaa naannoo Tigraayiif birrii miiliyoona…
Oduu biyya keessaa5845